Uyisebenzisa njani iTikTok kwiNtengiso yeB2B | Martech Zone
I-TikTok lelona qonga leendaba zentlalo likhula ngokukhawuleza kwihlabathi, kwaye linamandla okufikelela phezu kwe50% yabantu abadala base-US. Zininzi iinkampani ze-B2C ezenza umsebenzi olungileyo wokusebenzisa iTikTok ukwakha uluntu lwazo kwaye ziqhubele phambili ukuthengisa, thatha. Iphepha leTikTok likaDuolingo umzekelo, kodwa kutheni singaboni ishishini ukuya kwishishini (B2B) ukuthengisa kwiTikTok?
Njengophawu lweB2B, kunokuba lula ukuzithethelela ukuba ungasebenzisi iTikTok njengejelo lokuthengisa. Ngapha koko, uninzi lwabantu lusacinga ukuba i-TikTok lusetyenziso olugcinelwe ulutsha oludanisayo, kodwa iye yanda kakhulu ngaphaya koko. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, amawaka eendawo zoluntu ziyakuthanda cleantok kwaye incwaditok yenziwe kwiTikTok.
Intengiso yeB2B kwiTikTok imalunga nokufumana uluntu olunxibelelana nemveliso yakho kakhulu kunye nokudala umxholo obalulekileyo wolo luntu. Yiloo nto kanye esiyenzayo ebomini bethu Iphepha leTikTok kwiCollabstr, kwaye ngenxa yoko, sikwazile ukwenza amawaka eedola kwishishini elitsha njengenkampani yeB2B.
Ke zeziphi ezinye iindlela zokuthengisa kweB2B kwiTikTok?
Yenza umxholo we-Organic
ITikTok yaziwa ngayo eziphilayo ukufikelela. Iqonga libonelela kakhulu ngokuvezwa kwezinto eziphilayo kunamaqonga emveli afana noFacebook okanye i-Instagram. Oku kuthetha ukuba unokufumana isixa esihle seebhola zamehlo kwibhrendi yakho yeB2B ngokuthumela umxholo wendalo kwiphepha lakho leTikTok.
Ke zeziphi iintlobo zomxholo we-organic onokuthi uwuthumele kwi-brand yakho ye-B2B?
case Studies -Izifundo zemeko yindlela entle yokutsala abathengi abanokubakho ngaphandle kokuthengisa ngokuthe ngqo kubo. Unokwenza isifundo ngokufumana amabali empumelelo kwishishini lakho kwaye ubonise izinto abazenzileyo ngokufanelekileyo kubaphulaphuli bakho. Umzekelo, ukuba uyinkampani yentengiso yedijithali eyenza iintengiso zevidiyo kubathengi bakho, yenza izifundo ezithile kwezona ntengiso zibalaseleyo zeB2B zevidiyo kwaye kutheni zisebenza kangaka. Ungathatha iintengiso kwiinkampani ezifana neRed Bull kwaye uxelele abantu ukuba kutheni zisebenza kangaka. Ngokwendalo, uya kutsala abantu abangabathengisi okanye abanini bamashishini abafuna umntu oza kubenzela iintengiso. Izifundo zetyala zikuvumela ukuba uzibeke njengengcali, oku kuhle kuba xa abaphulaphuli bakho belungele ukuthenga, baya kuqala kuwe.
Njani-kwiiVidiyo Iividiyo zendlela yokwenza isitayile yindlela entle yokutsala abaphulaphuli ojolise kubo kwiTikTok. Ngokubonelela ngexabiso ngemfundo, uya kwakha abalandeli abathembekileyo abanokuba ngabathengi. Ukuze wenze iividiyo ezisebenzayo zesitayile sohlobo lwakho lweB2B, kufuneka uqale uqonde umthengi ojolise kuye. Ukuba umthengi ojolise kuye ngabanye abanini bamashishini, ngoko umxholo wakho kufuneka ubhenele kubo ngokuthe ngqo. Umzekelo, ukuba ndiqhuba i-arhente yoyilo lwegraphic ye-B2B, ndingafuna ukwenza ividiyo ebonisa abanye abantu ukuba bangayenza njani ilogo yasimahla yebhrendi yabo. Ngokubonelela ngexabiso, utsala abaphulaphuli abakuthembileyo.
Emveni kwenkqubo -Indalo ekrwada yomxholo wevidiyo emfutshane inika amashishini ithuba lokucaca ngakumbi. Ngokungafaniyo namanye amaqonga anje nge-Instagram, kulungile ukuthumela ungapholiswanga kwaye ukrwada ngasemva komxholo we-TikTok. Ukuthumela iivlogs, iintlanganiso, kunye neengxoxo ezibonisa imisebenzi yemihla ngemihla kwinkampani yakho ye-B2B kuya kwakha ukuthembana phakathi kweshishini lakho kunye nomthengi ojolise kuye. Ekupheleni kosuku, abantu banxibelelana nabantu ngcono kunokuba banxibelelane neenkampani.
Fumana iimpembelelo zeTikTok
Ukuba awuqinisekanga malunga nokuba ungaqala njani ngokwenza umxholo wenkampani yakho ye-B2B kwi-TikTok, cinga ngokufumana abaphembeleli kwi-niche yakho ukuze uphume emhlabeni.
UNyaka oMtsha ntsapho? Nantsi indlela onokuyisebenzisa ngayo i-Collabstr ukuqhuba amaphulo empembelelo! #intsebenziswano
♬ isandi soqobo - Collabstr
Iimpembelelo zeTikTok zinokunceda ishishini lakho leB2B ngeendlela ezahlukeneyo. Makhe singene kwiindlela ezimbalwa onokuthi ubaxhase ngazo abaphembeleli kwintengiso yakho yeB2B kwiTikTok.
Okuxhaswayo -Enye yeendlela ezilungileyo zokuphucula iimpembelelo zeTikTok kwintengiso yakho ye-B2B kukufumana kunye nokuqesha abantu abanempembelelo kwi-niche yakho ukwenza umxholo oxhaswe nguwe. Masithi ungumboneleli wokubamba ilifu kwaye uzama ukufumana ukuvezwa ngakumbi kubanini bamashishini ngeTikTok. Enye indlela enkulu yokwenza oku kuya kuba kuku fumana impembelelo kwindawo yetekhnoloji, enabaphulaphuli bezinye itekhnoloji ezihlala zifuna ukusingathwa kwamafu kwiimveliso zabo. Thatha lo menzi weTikTok, umzekelo, ungumphuhlisi wesoftware, kwaye abaphulaphuli bakhe banokuba nomdla wokuva malunga nezisombululo zokubamba ilifu.
Iintengiso zeTikTok -Enye indlela enkulu yokuxhasa iimpembelelo zeTikTok kukwenza ukuba benze umxholo weentengiso zakho. Nje ukuba ufumane impembelelo oyiqondayo ngenene imveliso yakho, unokubahlawula ukwenza iintengiso zevidiyo ezikumgangatho ophezulu kwimveliso okanye inkonzo yakho yeB2B. Phezu kwempembelelo edala iintengiso, uya kuba nakho mhlophe umxholo wabo ngokuthe ngqo ngeTikTok, okanye unokufumana ngokulula iifayile zoqobo kubo kwaye uziqhube njengeentengiso nakwamanye amaqonga. Ukusebenzisa iimpembelelo ukwenza eyakho TikTok iintengiso inokongeza umaleko wobungqina boluntu kunye nokunyaniseka okungekho kunye nomxholo wemveli we-brand.
Uzenza njani iintengiso zeTikTok ezingatyiyo? #intsebenziswano
Qasha abadali boMxholo weTikTok Enye indlela yokwandisa iimpembelelo zeTikTok kwibhrendi yakho yeB2B kukubaqesha nje ukuba benze umxholo wakho. Iimpembelelo zeTikTok ziqhelene kakhulu neqonga, i-algorithm yalo, kunye nabaphulaphuli abasebenzisa umxholo kwiTikTok. Ngokusebenzisa olu lwazi, banokudala umxholo onomtsalane kunye nonomdla ofumana ukubonwa okukhulu. Oku kunokuba yinto iqela lakho elingakwaziyo ukuyenza, okulungileyo, Kwimeko apho, fumana umntu okwaziyo ukuqonda imveliso okanye inkonzo yakho ye-B2B, kwaye ubahlawule ngenyanga ukwenza umxholo wephepha lakho.
Xa ujonge iTikTok njengejelo lokuthengisa leB2B, kubalulekile ukuvula ingqondo yakho kwiindlela ezahlukeneyo onokuthi uzithathe njengenkampani yeB2B kwiTikTok.
Okokuqala, kufuneka uchonge abaphulaphuli ojolise kubo. Ngubani onokufumana imveliso yakho iluncedo? Nje ukuba uchonge aba baphulaphuli, kufuneka ufumanise ukuba ngubani osele ebambe aba baphulaphuli kwiTikTok.
Ukusuka apha, unokuqesha umntu osele esenza umsebenzi olungileyo wokubamba abaphulaphuli, okanye ungasebenzisa umxholo wabo njengenkuthazo kwaye uqalise ukwenza owakho umxholo olungiselelwe abaphulaphuli abafanayo.
Fumana iimpembelelo zeTikTok Landela i-Collabstr kwiTikTok
Ukwazisa: Martech Zone isebenzisa ikhonkco elidityanisiweyo Collabstr kweli nqaku.
tags: b2bUkuthengisa kwe-b2bb2b isicwangciso sokuthengisaemveni kwenkquboincwaditokishishini-ukuya kwishishiniinto yokuphononongacleantokintsebenziswanoduolingoUyenza njani iividiyonefutheukuthengisa okunempembeleloumxholo wendalovidiyoTikToktiktok iintengisoabadali bomxholo wetiktokAbaphembeleli betiktokumxholo wevidiyoisicwangciso somxholo wevidiyoiimfutshane zevidiyo
Idesika yam yeOfisi yaseKhaya kunye neTekhnoloji yokuRekhodwa kweVidiyo, iNkomfa, kunye nePodcasting